IINDIDI ZEE-SKYLIGHTS (ISIKHOKELO SOYILO LOKUGQIBELA) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iindidi zee-Skylights (Isikhokelo soYilo lokuGqibela)
Iindidi zee-Skylights (Isikhokelo soYilo lokuGqibela)
Wamkelekile kwiindidi zethu zezikhanyiso zesikhokelo sokuyila kubandakanya iindlela ezithandwayo, ubungakanani, iindleko kunye nendlela yokukhetha efanelekileyo kwindlu yakho.
Ukukhanya kwendalo kunokuphucula imeko-bume yekhaya lakho kunye nokuhombisa ngeendlela ezininzi. Ukukhukulisa indlu yakho yangaphakathi ngezibane zendalo kunokukhanyisa ngokubonakalayo yimood, ngelixa unika ubungakanani obongeziweyo kubuhle bayo. Ukongeza kwezi, ukukhanya kwemini kunganceda ekuphuculeni ukusebenza kwamandla, ukunciphisa iindleko zamandla kunye nokunceda ukulawula ubushushu ekhayeni lakho. Ngaphandle kwamathandabuzo, enye yeendlela ezilungileyo zokuzisa ukukhanya kwendalo ekhayeni lakho kukusebenzisa isibane esibhakabhakeni.
Apha ngezantsi, sikunika esethu isikhokelo sokugqibela kwiindidi ezahlukeneyo zokukhanya kwesibhakabhaka kunye nezikhokelo ezinokukunceda ukhethe efanelekileyo kwikhaya lakho.
Yintoni ukukhanya kwesibhakabhaka?
I-Curb ekhwele iVs Deck ekhwele isibhakabhaka
Ubungakanani obuqhelekileyo beSkylight
Ukutyeba okuqhelekileyo kweglasi yeziBhakabhaka
Ungabukhetha njani ubungakanani bokukhanya kwesibhakabhaka kwikhaya lakho
Ulinganisa njani isibhakabhaka sokutshintshwa
Kunconywe ubungakanani besibhakabhaka ngokusekwe kuhlobo lwegumbi
Iindleko zee-Skylights ngokusekwe kuhlobo
Iindleko zee-Skylights esekwe kwiBrand
Iindleko zee-Skylights ngokusekwe kubukhulu
Iindleko zokuFakwa kwesibhakabhaka
Iindleko zokutshintshwa kwesibhakabhaka
Izibhakabhaka ezikhanyayo ezivulekileyo
Izitayile zoPhahla lwesiKhanyiso
Ezona ndidi ziDumileyo zeSibhakabhaka
Ukukhanya kwesibhakabhaka okanye isibhakabhaka esikhanyisiweyo okanye isibhakabhaka esikhanyisiweyo
I-Tubular Skylight okanye i-Tube Skylight okanye i-Sun Tunnels
Ilanga lokukhanya kwelanga okanye ukukhanya kwelanga
Ukukhanya kwesibane seWindows
Iimpawu zePolygon Skylights
Izibane zePhahla okanye iZibhakabhaka eziKhanyayo
Indawo yokukhanya esibhakabhakeni
Ikota ezikhanyisiweyo zelanga
Izibhakabhaka ezingezizo ezokwenziwa
Iindidi zoPhahla lwesiKhanyiso seglasi
UKUYA isibhakabhaka , ngamanye amaxesha ekubhekiswa kuyo njengokukhanya kophahla okanye ifestile yophahla kukuvula eluphahleni eligutyungelwe yinto eguqukayo okanye ebonakalayo njengeglasi, eyona njongo yayo ikukuvumela ukukhanya kwendalo kungene kulwakhiwo.
Ngokufanelekileyo, ukongeza ukukhanya kwelanga endlwini kuyafana nokongeza iwindow entsha, kodwa umahluko kukuba, ibekwe eluphahleni endaweni yodonga.
Nangona zenzelwe ikakhulu ukuhambisa ukukhanya, ukukhanya kwezulu kungasetyenziselwa ukuzisa ubushushu nokubanda. Ezinye iintlobo zezikhanyiso zesibhakabhaka zinokunceda ukubonelela ngokungenisa umoya. I-Skylights zisebenza ngokugqibeleleyo ekunikezeleni umbono omnandi wesibhakabhaka kwikhaya. Ngokubanzi, banceda ukuphucula ukusebenza kwamandla ekhayeni, ngelixa bekonyusa nexabiso lobuhle balo.
Izitayile ze-Skylight zihlelwa ngokwendlela efakwe ngayo. Izibhakabhaka zelanga zinokubekwa kwindawo yokubopha okanye kumgangatho ophakamileyo kwaye umahluko ophambili phakathi kwezi zimbini kukuba isibhakabhaka esikhwele esibhakabhakeni siqaqanjisiwe nophahla, ngelixa isibhakabhaka esibhakabhakeni esibhakabhakeni siphezulu kancinci kunophahla lobuso kwaye sibanjwe ngumqobo.
Apha ngezantsi, sijonga ngokunzulu ngakumbi kwezi ndlela zimbini zokukhanya kwezulu.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, izibane ezibengezelayo ezikhanyisiweyo zibanjelwe phezulu kunobuso bophahla ngomqolo. Intaba yokunqanda isakhelo esakhelwe ukukhanya kwesibhakabhaka. Esi sakhelo senziwe ngomthi okanye ngealuminium kwaye iphakanyiswe ngaphezulu kophahla ukuze isibhakabhaka sinamathele kuso.
Ngaphandle kokulula kokuyilwa kwesibane esibhakabhakeni esikhanyayo, kuyasebenza kwaye kuza nezibonelelo ezininzi. Zibalasele xa kufikwa kumba wokuthintela ukuvuza.
Xa kuthelekiswa nokukhanya kwesibhakabhaka esibhakabhakeni, ukukhanya kwesibhakabhaka esibekwe phezulu kuvumela ukuguquguquka ngakumbi kubukhulu. Unokufumana kwakhona isibane esibhakabhakeni esikhanyisiweyo esibhakabhakeni kwintengiso kwaye eyona nto intle ngayo kukuba ziyafikeleleka. Zisebenza kakuhle kulo naluphi na uhlobo lwegumbi kwaye kulula ukuzifaka.
Izibhakabhaka ezibekwe esibhakabhakeni zangoku zikhona ngakumbi kunezibane ezibengezelayo. Ezi zibhakabhaka zineefreyimu ezikhanyiswe ngqo eluphahleni. Kule ndlela yofakelo kunye nesitayile, awudingi kuthintelwa ukugcina isibane sakho esibhakabhakeni, kodwa endaweni yoko isibhakabhaka ngokwaso siya kusebenza njengothintelo.
Isakhelo sokukhanya kwesibhakabhaka esibekwe kwindawo ephezulu senziwe ngesinyithi esenziwe ngesinyithi okanye ialuminiyam ekhutshiweyo kwaye igxunyekwe eluphahleni. Le nkqubo ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba kukugungxula.
Izibhakabhaka ezibekwe esibhakabhakeni zisebenza ngamandla ngakumbi xa kuthelekiswa nohlobo lwazo olubekiweyo. Banokubonakala ngakumbi nangakumbi kuba bayadibana kakuhle kunye nesakhiwo kwaye bajonge ngakumbi ngaphandle komthungo. Nangona kunjalo, isibhakabhaka esikhwele esibhakabhakeni kunzima ngakumbi ukusifaka.
Kufuneka zitywinwe ngokuqinileyo ukuqinisekisa ukuba akukho manzi emvula okanye ukufuma okungena ngaphakathi. Iikiti ezibengezelayo zihlala zisetyenziselwa ukukhanya kwesibhakabhaka esibhakabhakeni ukukhusela indlu ekuvuza.
Ubungakanani besibhakabhaka abulandeli ubungakanani obungqongqo obuqhelekileyo njengoko zinokulungiswa nakweyiphi na ubungakanani ngokuxhomekeke kwiimfuno zomninikhaya kunye neenkcukacha. Zifumaneka ngobubanzi obahlukeneyo, ubude kunye nokuphakama kunye nobukhulu bunokwahluka ngokuxhomekeke kuhlobo noyilo lwesibhakabhaka.
Izibane zelanga ezingunxantathu kunye nezibane ezikhanyayo ezibonisa iglasi ububanzi Uluhlu oluqala Ii-intshi ezingama-14 ukuya kuma-72 okanye iisentimitha ezingama-36 ukuya kwezili-183 , ngelixa zabo ubude Uluhlu naphi na I-intshi ezingama-16 ukuya kuma-96 okanye iisentimitha ezingama-41 ukuya kuma-244 . Ukukhanya kwesibane esibekwe phezulu, ngaphakathi nangaphandle kwemilinganiselo yomda zombini zichaziwe kwaye zihlala le milinganiselo zinomahluko phakathi kwee-intshi ezi-2 ukuya kwezi-3. Iibhubhu ezisesibhakabhakeni zihlala zinobubanzi obuziisentimitha eziyi-14 okanye ii-36 iisentimitha kwaye ngokwesiqhelo azidluli kwii-intshi ezingama-22 okanye iisentimitha ezingama-55. ‘
Ubungakanani beglasi esetyenziswe kwizibhakabhaka ziyahluka ngokuxhomekeke kuyilo kunye nobukhulu, kodwa ngesiqhelo ukukhanya kwesibhakabhaka, iglasi eshinyeneyo iyayifuna.Ubukhulu obuqhelekileyo beglasi esetyenziselwa ukukhanya kwezibane ngokubanzi buyahluka ukusuka kwi-⅛ intshi okanye kwi-3.2 yeemilimitha ukuya kwi-intshi okanye iimilimitha eziyi-6.35.
Ngokusekwe kwimigangatho yemizi-mveliso, isibane esibhakabhakeni kufuneka sibe malunga neepesenti ezi-5 zomgangatho wegumbi elineefestile ezininzi. Kwelinye icala, ukuba igumbi lakho lineefestile ezimbalwa, kufuneka ubuncinci libe liipesenti ezili-15 zommandla wegumbi. Oku kuyakuqinisekisa ukuba isibhakabhaka sakho sisebenza ngamandla.
Ukufumanisa umhlaba opheleleyo wegumbi, vele ulinganise ubude kunye nobubanzi bomgangatho usebenzisa itheyiphu yokulinganisa. Phindaphinda ubude begumbi ngobubanzi balo, kwaye inani elisisiphumo yindawo epheleleyo yegumbi lakho.
Ukuba igumbi likhanyiswe kakuhle kwaye lineefestile ezininzi, phinda-phinda wonke umgangatho wegumbi lakho nge -05, ngelixa ineefestile ezimbalwa kwaye imnyama ngokubanzi, yande ngo -15. Ukuba igumbi liwela nje phakathi okanye alikho mnyama kwaye alikhanyisanga kakuhle, sebenzisa nje ixabiso eliphakathi .10 uze uliphindaphinde kwigumbi lakho elipheleleyo kumgangatho. Inani elivelisiweyo linemifanekiso eqingqiweyo yesikwere okanye indawo iyonke yesibhakabhaka sakho.
Ukuqinisekisa ukuba ukhetha ubungakanani obuchanekileyo bokutshintsha isibane sakho esele sikhona, kukho iindlela ezininzi ekufuneka uzilandele xa uzilinganisa ngokuxhomekeka kuhlobo lwazo.
Okokuqala, kukuzama ukufumanisa ukuba loluphi uphawu lombane omdala. Izibane ezikhanyiswa esibhakabhakeni ngokwesiqhelo zinamathegi afunyenwe kwisakhelo sangaphakathi, umbhinqo wangaphandle okanye ubekwe kwiglasi ebandakanya igama lalo. Ukuba uyayazi i-brand, ungaqhagamshelana nomthengisi wakho kwaye banokufumana eyiyo ehambelana nayo. Nangona kunjalo, nkqu nolwazi olufunyenwe kwithegi yesazisi, kusabalulekile ukulinganisa isibhakabhaka esidala ukuqinisekisa ukuba entsha yakho iya kulungela ukuvulwa kakuhle.
Usilinganisa njani isibhakabhaka ngokutshintsha ngokutsha kuxhomekeke kuhlobo lwaso?
Ukukhanya kwesibhakabhaka esikhwele - Linganisa ubude nobubanzi bendiza yeglasi engaphandle ukusuka kumda wangaphakathi wokubopha. Ngaphakathi endlwini, Linganisa ubude bokuvula i-drywall kunye nobubanziubude nobubanzi beglasi yangaphandle.
Ukukhanya kwesibhakabhaka esinyuswe kwinqanaba - Linganisa ubude nobubanzi bomda ongaphandle kwaye uqiniseke ukuba ubandakanya umqobo ngokwawo kunye nayiphi na into ephahleni. Ukusuka kumda wangaphakathi wesibane esibhakabhakeni, linganisa iglasi yangaphandle kunye nobubanzi.
Hambani kumagunjana, kwigunjana, kwigumbi langasese nakwibhafu, kwikhabhathi nakwizakhelo - mayibe ziisentimitha ezingama-30 ukuya kuma-40 ubukhulu
Amagumbi amancinci kunye nendawo yokutyela isidlo sakusasa-kufuneka ubuncinci ibe ziisentimitha ezingama-50 ububanzi
Ilungele igumbi lokuhlambela elipheleleyo-40 x 40 iisentimitha
Amagumbi amancinci njengokufunda - 50 x 50 iisentimitha
Igumbi lokuhlambela / indawo, amangenelo-60 x 60 iisentimitha
Amagumbi asikwere amakhulu kunye namagumbi osapho kunye neelounges-70 x 70m iisentimitha ukuya kuma-80 x 80 iisentimitha
Ukukhanyisa indawo yokuphumla - i-77.5 x 77.5 iisentimitha
Kwamagumbi amakhulu kakhulu - kwizibuko lesibhakabhaka, ubukhulu kufuneka ubuncinci bube ziisentimitha ezingama-90 x 90 iisentimitha, 1mitha x 1 yemitha, 1.2 yeemitha x1.2 yeemitha
Izibane zelanga eziziingxande
Iipaseji zoxande-400mm x 600mm
Ngaphezulu kwebha yesidlo sakusasa, okanye amagumbi amancinci-600mm x 800mm, 500mm x 900mm
Amagumbi amakhulu oxande-600mm x 1200mm
Ixabiso eliphakathi lokukhanya kwesibhakabhaka ngeIindleko zokufaka zijikeleze i- $ 1600, ngamaxabiso aqhelekileyo aphakathi kwe- $ 900 ukuya kwi-2500 yeedola zabasebenzi kunye nezixhobo.
Ixabiso lesibhakabhaka ngokwalo liyahluka ngokuxhomekeka kuhlobo, isitayile, uphawu kunye nobungakanani. Apha ngezantsi kukho ezinye zeendleko zokukhanya kwezulu ngokusekwe kwizinto ezahlukeneyo:
Izibane zelanga ezihleliweyo -Izikhanyiso zelanga ezixabisekileyo zibiza phakathi kwe- $ 150 kunye ne- $ 1,500.
Izibhakabhaka zomoya -Lindela ukuhlawula phakathi kwe- $ 300 kunye ne- $ 2,500.
Amaxabiso e-Flat-Roof Skylight - Kwizibhakabhaka ezenzelwe uphahla olusicaba, lindela ukuhlawula phakathi kwe- $ 250 kunye ne- $ 2,000. Iindleko zezinto ezenzelwe ukukhanya kwesibhakabhaka sophahla ziyafana, kodwa zifumana inkcitho eyongezelelekileyo malunga nobungqina bokuvuza.
Izibhakabhaka esibhakabhakeni-Uluhlu lwamaxabiso eenkwenkwezi zedome ziphakathi kwe- $ 200 ukuya kwi- $ 3,000.
IVelux-Velux lelona lizwe likhulu elenza isibhakabhaka. Banikela ngeentlobo ezininzi kunye neemodeli- ukusuka kwizibhakabhaka ezikumgangatho ophakamileyo ukuya kumbane wokukhanya kwesibhakabhaka kunye neewindows ezizenzekelayo. Ukuthengwa ngakunye kuza newaranti yokuvuza iminyaka engama-20. I-Velux skylights zibiza phakathi kwe- $ 1,100 ukuya kwi-3,700 yeedola kufakelwe ukufakwa. Banikezela ngesibhakabhaka esibhakabhakeni ngexabiso eliphantsi le- $ 200 ukuya kwi-500 yeedola, ukufakelwa kungafakwanga.
I-Fakro-I-Fakro ibonelela ngesibane esikhanyayo kunye nesibhakabhaka somoya esisandla, esombane okanye esilawulwa lilanga. Imveliso nganye yabo iza newaranti yeminyaka engama-25 yeglasi kunye newaranti yeminyaka eli-10 ngokuchasene nokuvuza. Ixabiso leenkwenkwezi zesibhakabhaka phakathi kwe-300 ukuya kwi-2,500 yeedola.
IPella-Pella ibonelela ngemveliso ebanzi equka isibhakabhaka. Ngokuqhelekileyo zibiza kakhulu kunezinye iimveliso kodwa zibandakanya kuphela iwaranti yeminyaka engama-20 engakhuseliyo ekuvuzeni. Ixabiso lesibhakabhaka esikwi-Pella liphakathi kwe- $ 150 ukuya kwi-1,700 yeedola.
I-Sun-Tek -I-SunTek luphawu oludumileyo lweendawo zokuhlala kunye nezorhwebo ezikhupha isibhakabhaka ezinikezela ngobugcisa kwiivenkile zokuphucula ikhaya. Endaweni yeglasi yokwenyani. Iimveliso zabo zisebenzisa iiacrylic okanye iipolycarbonate compounds. Ukuthengwa ngakunye kuza newaranti yeminyaka eli-10 egubungela ukubuyiselwa kweendleko ezizeleyo zezixhobo kuphela. Ixabiso leenkwenkwezi zelanga ukusuka kwi-200 ukuya kwi-3,000 yeedola.
Ngelixa ukukhanya kwezulu kungenziwa ngobukhulu obahlukeneyo ngokwesiko, ubukhulu becala buza ngobukhulu obuqhelekileyo. Nanga amanye amaxabiso aphakathi kwizibhakabhaka ngokusekwe kubungakanani bazo:
I-intshi ezingama-16 W x 16 intshi H- $ 150 ukuya kwi-600 yeedola
Iintshi ezingama-16 W x 24 intshi H - $ 200 ukuya kuma-700 eedola
16 intshi W x 32 intshi H - $ 300 ukuya $ 1,000
Iintshi ezingama-24 W x 32 intshi H - $ 300 ukuya kwi-1,200 yeedola
24 intshi W x 48 intshi H - $ 500 ukuya ku-2,000
24 intshi W x 72 intshi H - $ 900 ukuya ku-2,700
I-intshi ezingama-48 W x 48 intshi H - $ 1,100 ukuya kwi-3,500 yeedola
Imirhumo yabasebenzi yokufaka isibhakabhaka esikhanyayo ihlala iqala kwi- $ 500, kodwa inokuya kwi- $ 4000 ngokuxhomekeke kubungakanani besibhakabhaka kunye nobunzima beprojekthi. Eminye imiba efana nezinto zokuphahla, ukufikeleleka kunye nolwakhiwo lwekhaya lakho (isandi sophahla, ukuphakama kwesilingi, iimeko ezikhoyo zegumbi) nazo zinokuba negalelo ekunyukeni kwexabiso.
Ingcebiso ehlekisayo kumyeni nomyeni
Ngaphandle kokuba unezakhono eziphezulu ze-DIYer, kungcono ushiye ufakelo kulwazi. Umsebenzi opheleleyo wokufaka isibhakabhaka uyadinisa kwaye ufuna ukuchaneka. Ukufaka isibane esibhakabhakeni kubandakanya ukusika umngxuma eluphahleni, ukunyusa isibane esibhakabhakeni, ukwakha ukusukelwa ukusuka esibhakabhakeni ukuya eluphahleni lwangaphakathi kunye nokupeyinta uphahla lonke phantsi kwelanga. Ukongeza koku, ubungqina bokuvuza buyafuneka.
Isibhakabhaka esibonisa umoya okanye esingena moya esinolawulo olukude sifuna umsebenzi wombane. Le yinkcitho eyongezelelweyo ekufuneka ibandakanyiwe kuhlahlo-lwabiwo mali luphela. Ngokwesiqhelo, abasebenza ngombane babiza phakathi kwe- $ 75 kunye ne- $ 300 kolu hlobo lomsebenzi.
Iindleko zokulungisa nokutshintsha isibhakabhaka ziyahluka kwaye kuxhomekeke kubungakanani bomonakalo. Nazi ezinye zexabiso eliqhelekileyo kuhlobo ngalunye lomsebenzi:
Iindleko zokulungisa isibhakabhaka -Kumndilili, kubiza malunga ne-750 yeedola ukulungisa isibhakabhaka, kodwa amaxabiso anokunyuka aye kwi- $ 1150 ngokuxhomekeke kubungakanani bomonakalo. Ukulungiswa kuhlala kubandakanya ukulungisa iindawo ezaphukileyo, ukujonga ukuvulwa, oomatshini, ukutywina kunye nokudanyaza, ukulungiswa okubanzi kweenxalenye ezonakalisayo kunye nokulungisa iingxaki ngokuvuza.
Iindleko zokutshintsha isibhakabhaka -Ukutshintsha isibane esikhanyayo kubiza ngaphezulu kwaye kuhlala kuqhuba naphina phakathi kwe- $ 900 kunye ne- $ 2,300. Oku kubandakanya ifestile entsha yophahla kunye nokutywina kunye nofakelo.
Iindleko zokutshintsha iglasi yesibhakabhaka -Ukutshintsha iglasi kuphela kuya kukuxabisa naphi na phakathi kwe- $ 300 ukuya kwi- $ 800, kubandakanya nabasebenzi. Ukuba isibhakabhaka sakho sineepaneli ezimbini okanye ezintathu, siwela esiphelweni solu xabiso lwamaxabiso.
Iindleko zokulungisa ukuvuza - Ukuvuza yeyona ngxaki ixhaphakileyo kwizibhakabhaka. Oku kuhlala kubiza malunga ne-300 ukuya kuma-800 eedola ukulungisa.
Iindleko zokutshintsha imoto yokukhanya kwesibhakabhaka- Imoto entsha esebenzisa amandla elanga inokubiza ukuya kuthi ga kwiidola ezingama-500. Ukutshintsha imoto ephukile esibhakabhakeni kungabiza imali encinci njenge- $ 100 ukuya kwi-500, kodwa ukuba umonakalo ufuna ukuqesha umbane, lindela ukuba indleko inyuke naphi na ukusuka kwi- $ 270 ukuya kwi- $ 1000.
Iindleko zokutshintsha izixhobo ezenziwa ngesandla - Iindlela ezisebenza ngesandla sokukhanya esibhakabhakeni zibiza imali engaphantsi kunezo zombane. I-crank entsha yesandla iya kubiza malunga ne- $ 110 kunye neendleko zabasebenzi ezongeziweyo, ukuyifaka endaweni yayo kuya kuthi ga kwi-200 ukuya kwi-400 yeedola.
Izibane ezisesibhakabhakeni ziza neemodeli ezisebenzayo nezinokulungiswa. Izibane ezikhanyayo ezivulekileyo zibizwa ngokuba ziindawo zokukhanya zomoya ophumileyo kuba ngaphandle kokubonelela ngokukhanya kwindawo, zikwavumela ukujikeleza komoya kwisithuba.
Izibhakabhaka ezikhanyayo ezivulekileyo zihlala zinehenjisi ephezulu kwaye zivule iisentimitha ezimbalwa. Kuba abafikeleleki, abavelisi banikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokuzilawula. Nazi ezinye zeendlela zolawulo olusebenzayo kwizibhakabhaka ezivulekileyo:
Izibhakabhaka eziSebenziswe ngesandla - Ukukhanya kwesibhakabhaka okusebenzayo ngesandla zezona modeli zisisiseko zinikezelwa kwintengiso. Zivulwa kwaye zivaliwe ngesandla kwaye azisebenzisi iremote control. Izibhakabhaka ezisebenza ngesandla ezifakwe eluphahleni ezingaphantsi kweenyawo ezili-15 ukuphakama ziza nesibonda sokwandisa ukuze kube lula ukufikelela kuso. Olu hlobo lwesibhakabhaka olusebenzayo lukhetho olunemali eninzi kodwa luya kufuna umzamo ongaphezulu wokuvula xa kuthelekiswa noogxa balo abaneemoto nabazenzekelayo.
Izibane ezihamba ngesithuthuthu Izibane ezisesibhakabhakeni ezineemoto zinokuvulwa kwaye zivaliwe kusetyenziswa iswitshi yodonga okanye isandla esibambe kude. Izibane ezisesibhakabhakeni ezihamba ngemoto ezinezinto ezongezelelweyo ezinje ngee-shades ezakhiweyo zihlala zine-wireless ekude kunye nekhonsoli yodonga ekhethekileyo. Ezi zilungele iisilingi eziphakamileyo nezingafikelelekiyo kunye nezibane eziza kuvulwa rhoqo.
Bonke abavelisi abakhulu bokukhanya kwesibhakabhaka banikezela ngezibane zelanga ezihamba ngemoto. Zibiza ngaphezulu kokungafaniyo okusebenza ngesandla kodwa zilunge ngakumbi kwaye kulula ukuzisebenzisa. Iindleko zokufakelwa ziphakamile kakhulu kuba ziya kufuna umsebenzi wombane onjengokuhambisa iingcingo zombane esibhakabhakeni.
Izibane ezikhanyayo ezizenzekelayo Olona hlobo lubiza kakhulu lokukhanya kwesibhakabhaka zizibhakabhaka ezizenzekelayo. Ezi modeli zihlala zidityaniswa nesenzi esivala ngokuzenzekelayo isibhakabhaka xa sibona imvula okanye ukufuma. Iimodeli ezinobunkunkqele ngakumbi zibandakanya iisenzi zobushushu ezivula ngokuzenzekelayo isibhakabhaka xa igumbi lifikelela kubushushu obucwangcisiweyo. Unako kwakhona ukucwangcisa isibhakabhaka esizenzekelayo ukuba sisebenze ngamaxesha athile osuku.
Ikhitshi elinefestile ye-bay kunye nophahla lwecawa yecawa enezibane.
Uhlobo lokukhanya kwesibhakabhaka lubhekisa kubume bayo kunye nolwakhiwo lwegilasi eliyisebenzisayo. Ngokubanzi, izitayile zokukhanya kwesibhakabhaka zinokuhlelwa ngokwamaqela amabini aphambili , (1) isitayile esisiseko okanye isitayile sophahla olusicaba kunye (2) nesimbo esimiselweyo.
Isibane esibhakabhakeni esisiseko okanye esicaba zizibhakabhaka ezingakhanyisi ngaphezu kophahla. Zithe tyaba kwaye zilandela umgangatho wophahla. Izibane ezikhanyayo zophahla olucwangcisiweyo zinokuba ngumgangatho okanye ukunyuswa komqolo. Olu hlobo lokukhanya kwesibhakabhaka lukhethwa ukuba ufuna ukugcina inkangeleko yangaphandle yendlu yakho ihambelana. Xa kuthelekiswa nezitayile ezigungxulweyo, isibane esibhakabhakeni sophahla sinika ukukhanya ngakumbi.
Isibhakabhaka esikhanyayo zichasene nesibane esibhakabhakeni sophahla kuba ziqikelela ngaphezulu kophahla lobuso. Banokusebenza njengenxalenye yoyilo olumangalisayo ekhaya kodwa ngokubanzi bayabiza kakhulu kuba bafuna iglasi engaphezulu.
Izibane ezikhanyiswa esibhakabhakeni zinokuhlelwa ngokwezixhobo zazo, uhlobo lokusetyenziswa, iintlobo zophahla kunye neendidi zegumbi. Nazi ezinye zeentlobo ezithandwa kakhulu kwizibhakabhaka:
Igumbi lokulala elinesibhakabhaka kunye ibhedi phambi kwefestile .
Ukongeza ekuphuculeni inkangeleko yekhaya lakho, isibane somoya esingena umoya sinezinye izibonelelo ezifanelekileyo. Ngaphandle kokuba ngumthombo wokukhanya kwendalo esithubeni, ukukhanya komoya okuphefumlayo okanye ukukhanya okuphuma esibhakabhakeni kusebenza enye injongo ngokubonelela ngokungenisa umoya ngakumbi nangokuvumela umoya ungene endlwini-yiyo loo nto igama. Olu hlobo lokukhanya kwesibhakabhaka lunokuvulwa kwaye lufana nefestile, kodwa lufakwe kuphahla lwendlu yakho.
Zihlala zifakwe kwiindawo ezifuna umoya ongenisa umoya, njengezindlu zangasese, amagumbi okugaya kunye neekhitshi. Isibane esikhanyayo somoya sisebenza kuyo yonke le ndawo kuba siyakuvumela nakuphi na ukufuma okungaphezulu ukuba kuphume esithubeni, ngelixa kugcinwa ukuhamba rhoqo komoya omtsha egumbini.
Izibane ezisesibhakabhakeni zeThubhu zezona ndlela zincinci zaziwayo zokuzisa ukukhanya kwindawo. Ikwabizwa ngokuba yi isibhakabhaka esibhakabhakeni okanye i-tunnel yelanga , isibhakabhaka esibhakabhakeni asizizo iifestile ezinokuvulwa. Njengoko igama labo libonisa, ityhubhu yokukhanya kwesibhakabhaka iqulathe umbhobho omncinci wombhobho oqala ngaphezulu kophahla lwakho ukuya kufikelela kwigumbi apho ufuna ukuba ifakwe khona.
Ngokwesiqhelo, ityhubhu inobubanzi obujikeleze i-intshi ezili-10 ukuya kwe-15 kwaye ugqunywe ngedome ephezulu ngaphezulu. Idome iqokelela ukukhanya emva koko isebenzise ubuchule be-optical, iphinda ithumele ukukhanya kwelanga kwendalo phantsi kwe-shaft yayo. Umbhobho uhlala kwisipili sesilivere njengokugqiba, yiyo loo nto ivumela ukukhanya ukuba kudlulise ngokupheleleyo. Le tyhubhu ibonakalisa kakhulu inxibelelene ne-diffuser yangaphakathi.
Ngenxa yokuba icwecwe, isibhakabhaka esibhakabhakeni sisisombululo esifanelekileyo kwabo bangenaso isithuba sophahla lwelanga. Ungayikroba ukuze ilingane kwisithuba apho iintlobo ezinkulu zezibane ezisesibhakabhakeni zingenakulunga. Ubungakanani bayo kunye nokumila kwayo kuyayivumela ukuba idityaniswe ngokulula kuyilo lwendawo. Ngaphandle kokukhanya okuncinci kwesibhakabhaka esibhakabhakeni baya kuba nakho ukubonelela ngesixa esaneleyo sokukhanya kwendalo kwindawo. Isibane esibhakabhakeni silungele ukukhanya ngokuthe ngqo kwamabala athile, iindawo kunye nezinto ezifana neendonga zegumbi lokuhlala, ii-closets, ii-pantry, iifoyers kunye neepaseji.
Xa kuthelekiswa nolunye uhlobo, izibane zesibhakabhaka zilula kakhulu ukufaka. Ayifuni kuvulwa enkulu kwaye ikhawuleza kakhulu ukunyusa. Nangona kunjalo, kukho ukubuyela umva kumenyezeli wesibhakabhaka. Ayiboneleli ngombono, ngokungafaniyo noogxa bayo abazinzileyo okanye abangena umoya. Ke ukuba ufuna ukukhanya kwesibhakabhaka ngezizathu zobuhle okanye ufuna ukonwabela ukujonga phezulu esibhakabhakeni, ke olu khetho alunakuba lolona lufanelekileyo kuwe.
Izibane ezisesibhakabhakeni seDome zimile okwedome kwaye zenziwe ngeplastiki eyomeleleyo eguqukayo evumela ukukhanya kwelanga kwisithuba. Isibhakabhaka esibhakabhakeni seDome sinemiqolo emibini, esinye sisikhuselo kwaye esinye sisambathisa. Ubume bangaphandle butyebile kwaye bungcolisiwe, ngelixa umaleko wangaphakathi unciphile kwaye wenziwe ngezinto ezicacileyo. Ngamanye amaxesha kubhekiswa kubo njengombane wesibhakabhaka se-acrylic okanye isibhakabhaka esibunjiweyo sedome.
Ngokungafaniyo nesibhakabhaka esibhakabhakeni esenzelwe ukukhanya kwebala kunye nokuhambisa imitha kwindawo ethile, isibhakabhaka esibhakabhakeni sisasaza ukukhanya kwelanga kwigumbi. Nokuba ingumthombo omncinci, inokukhanyisa igumbi liphela elinemilambo emincinci yokukhanya. Izibane ezisesibhakabhakeni zeDome zikulungele ukungena kwiminyango yokwakha nanjengoko zinokuphucula ngokubonakalayo imeko yendawo kwaye zivise nomtsalane ngakumbi.
Olu hlobo lokukhanya kwesibhakabhaka lunokusetyenziselwa useto lwentengiso kunye neendawo zokuhlala, ngakumbi iifoyers kunye neendawo zokuphembelela. Isibhakabhaka esibhakabhakeni sinokusetyenziselwa ukuqaqambisa amanqaku afana nemizobo, imifanekiso eqingqiweyo, izinto zokutyala, imizobo, ebonisa amachibi kunye nezinye izinto.
Njengayo nayiphi na into enikwe amandla elanga, isibane sombane esisebenzisa amandla elanga sisebenzisa amandla ngokuthe ngqo kwimitha yelanga. Isebenza ngaphakathingendlela efanayo nesibane esiqhelekileyo sombane. Ngokwesiqhelo, isibane selanga siza nesixhobo esincinci esilawulayo esikukuvumela ukuba uvule kwaye uvale iwindow yokukhanya kwesibhakabhaka. Unokuthenga ukukhanya kwesibhakabhaka esinamandla elanga.
Izibane ezisesibhakabhakeni zithandwa kakhulu kuba zinobuhlobo kwindalo esingqongileyo, zisebenza ngamandla kwaye ziyanceda ekongeni imali kwiibhili, ngelixa zithintela neengxaki zokusetyenziswa kwamandla.
Kuba beza nolawulo olukude, bakwakhona ngendlela elula ukuba bayisebenzise, ​​njengoko unokugcina indawo ekude ekufuphi, ikuvumela ukuba usebenze ukukhanya kwelanga nangaliphi na ixesha onqwenela ngalo ngokucofa nje iqhosha. Inokuthenjwa kakhulu.
Izibane zelanga ezisebenza ngombane azixabisi ngaphezu kombane. Ngokunikwa izibonelelo ezifanelekileyo eziza nayo, eneneni lukhetho oluhle kakhulu lokutyala imali kuyo.
Izibane ezisesibhakabhakeni zesiko zizibhakabhaka ezenzelwe ngokukodwa iinkcukacha zomninikhaya kunye neemfuno. Zi-odolwe ngokuthe ngqo kumvelisi okanye kumhambisi kwaye zenziwe ngokobume obahlukeneyo, ubukhulu, uyilo, isitayile kunye nobukhulu. Uyilo lokugqibela kunye nokubalulwa kwesibane kuyilo lwesiko kuya kuchaza indleko zento kunye nexesha eliyimfuneko lokuyigqiba. Kwi-avareji, ukukhanya kwesibhakabhaka okuqhelekileyo kuya kuthatha malunga nenyanga ukuvelisa.
Olu hlobo lokukhanya kwesibhakabhaka lufaneleke kakhulu ukuba uphahla lwendlu yakho esele lukhona alunakho ukuhlalisa uhlobo oluqhelekileyo okanye oluqhelekileyo lwesibhakabhaka. Inokwenziwa ngeIglasi enganyangekiyo yinkanyamba kwaye inokubandakanya izinto ezizodwa ezinje ngemvula kunye nolawulo lweqondo lobushushu.
Izibane ezisesibhakabhakeni zesiko zinokudityaniswa ngokulula kuyilo lwesakhiwo ukuphucula i-aesthetics kunye neempawu zokwakha. Ukongeza, basabonelela ngezibonelelo ezifanayo eziza kunye nolunye uhlobo lokukhanya kwesibhakabhaka, njengokukhanya kwendalo okongeziweyo kunye nokungenisa umoya kwindawo.
Olona hlobo ludumileyo lwezinto ezibengezelayo zilungisiwe.Ukuba awunyanzelekanga ukuba uphucule ukuhamba komoya kwisithuba kodwa ufuna ukwenza kukhanye ngakumbi, isibane esibhakabhakeni esisigxina lukhetho olufanelekileyo kuwe. Ngokungafaniyo nokukhanya komoya okukhanya okuphezulu okubonelela ngokungenisa umoya owongezelelekileyo, isibhakabhaka esingagungqiyo sinika ukukhanya kwendalo kwindawo. Azivuli kwaye zifana kakhulu nepaneli yeglasi echanekileyo okanye iwindow echanekileyo ethe yatywinwa ngokupheleleyo.
Izibane zelanga ezihleliweyo zenziwe ngeglasi engama-90% kunye nesakhelo sealuminium. Izinto ezizezinye zesakhelo zibandakanya amaplanga kunye nezinye iintlobo zentsimbi. Amalungu olu hlobo lwesibhakabhaka avalwe ngokuqinileyo ukukhusela nakuphi na ukufuma ukuba kungene. Kwezinye iimeko, idome yeplastiki ehlala ihleli yongezwa ngaphandle ukuyiphucula. Izibane ezikhanyayo ezihleliweyo ziyafumaneka ngokubanzi kwiivenkile zehardware zasekhaya kunye nabathengisi abakhulu be-Intanethi.
Izibane zelanga ezihleliweyo zikulungele ukufakwa kwiindawo ekunzima ukufikelela kuzo. Zikwalungele kwiindawo ezinobumdaka obuphantsi njengezitebhisi kunye nee-attics njengoko zibonelela ngokukhanya okukhulu. Izibane zelanga ezihleliweyo zikwalungele ukusetyenziswa kuphahla oluphezulu okanye uphahla lwendlu yecawa kwaye banokuba nefuthe elibonakalayo kuseto olunjalo.
Ukukhanya kwelanga kwifestile yokuthambeka kukwahluka kwesibane esikhanyayo esinomoya. Yahlukile kwizibhakabhaka eziqhelekileyo zomoya ngendlela evula ngayo. Izibane ezitshixwayo ezijikelezayo zinehenjisi ephezulu ebavumela ukuba basebenze ngendlela yokuthambeka.
Ngamanye amaxesha kubhekiswa kubo njengefestile yophahla oluthambisayo.
Iipylram zasesibhakabhakeni, njengoko igama labo lisitsho, zithatha imilo yephiramidi kwaye zinamacala amane. Zijongeka ngathi zinophahla oluncinci olwenziwe ngeglasi kunye nesakhelo sensimbi kwaye zihlala kwindawo evulekileyo yesikwere eluphahleni.
Kwezinye iiyilo, izibane zesibhakabhaka zepiramidi zinokuba nemithambo kunye neepllins ezixwesileyo. Ezi ziyafumaneka kumathambeka aliqela kunye neepaki, kuxhomekeke kuyilo lendlu kunye nobunjineli bobume, ngelixa ubukhulu bazo bunokwahluka ukuya kuthi ga kwi-20 yeenyawo ububanzi ngokuxhomekeke kwimfuno.
Iipylram zasesibhakabhakeni zihlala zixhonywe kumanqwanqwa kuphahla olusicaba. I-Theta zihlala zikhethwa ukuba zisetyenziswe kwiindawo ezinkulu ezinjenge-lobbies nakwiindlela zokungena.
Olunye uguquko oludumileyo lweepilramid skylights zibandakanya isibhakabhaka esikhanyayo esinamacala amaninzi okanye isibhakabhaka esikhanyayo eneendawo ezivulekileyo ezi-6 okanye ezisi-8, kunye nokuvuleka okungalinganiyo kwamacala amaninzi. Olunye umahluko yile isibhakabhaka se-hip ridge efana kakhulu nokukhanya kwesibhakabhaka okuqhelekileyo kwepiramidi, kodwa endaweni yokuba ivulwe ngesikwere, ihlala kwindawo evulekileyo yoxande.
Ukusuka ngaphakathi kwekhaya, izibane ezijikelezayo ezinemilo zinesimo setyhula, kodwa ngaphandle zisicaba. Izijikelezo ezisesibhakabhakeni ezijikelezileyo zinokuphakanyiswa okanye zinyuswe umda.
Iipolygon skylights ziluhlobo lwesibane esibhakabhakeni esimilo esingaqhelekanga- njenge-octagon, iheksagon, unxantathu okanye imilo ekhethekileyo. Iipolygon skylights zinokunika isiphumo esihle kakhulu kwimbonakalo yekhaya.
Izibhakabhaka ezikhanyayo zeepolgoni ezihlukeneyo ziimpawu zeenkwenkwezi zeepoligoni. Isiseko sihlala si-octagonal, hexagonal okanye enye imilo eyahlukileyo, ngelixa umphezulu ugqunyiwe.
Ngaphambi kokuba izibane zenziwe ngokuthandwa, izibane zophahla zazisetyenziselwa ukuzisa ukukhanya kulwakhiwo.
Izibane zephahla zihlala zibume besikwere kwaye zivela kuphahla. Onke amacala ayo afakelwe ngeglasi.
Isibhakabhaka esibhakabhakeni esibhakabhakeni luhlobo lwesibhakabhaka esikhanyisiweyo, kodwa endaweni yokuqikelela phezulu ukuze wakhe incopho, ifakwe iglasi egobile. Iglasi egosogoso iyaxhaswa kwisiphelo ngasinye ngesiqwenga seglasi yesangqa esisiqingatha, esiya kuthi ke sidale uhlobo lomgqomo.
Izibane ezisesibhakabhakeni ezikwikota yokwahluka kwesibhakabhaka esibhakabhakeni kodwa endaweni yokuba nesiglasi sesangqa esisiqingatha ekugqibeleni, zisebenzisa iglasi yesangqa sekota.
Olu hlobo lokukhanya kwesibhakabhaka lukhethwa ngokufuthi kwiipaseji, ii-canopies, iindawo zokumisa iimoto, iivenkile ezinkulu, amaziko ezonyango kunye nemfundo, kunye nezakhiwo zemizi-mveliso.
Izibane ezisesibhakabhakeni zisebenzisa iglasi embumbulu endaweni yeglasi ethe tyaba. Oku kunceda ngokunyusa ngamandla ukomelela kwephepha leplastiki. Ngaphandle kokomeleza amandla, ikwanceda ekupheliseni ukwanda kunye nokucutha. Izibane ezisesibhakabhakeni ziyaziwa ngokuba Iibhola zePlexiglas.
Iiplexiglass bubble skylights ziyaziwa ngokuba zisebenza kakuhle kwaye zingabizi. Ziyasinda, ezenza ukuba kube lula kakhulu ukuzifaka. Olu hlobo lokukhanya kwesibhakabhaka lulungele ukufakelwa kophahla olusicaba njengoko zinceda ukuchitha amanzi kakuhle xa kunetha. Ubume babo obukhethekileyo buyabanceda ukuba baqokelele ukukhanya kwii-engile ezininzi. Ukwenza naliphi na indawo likhanyiswe kakuhle. Ukongeza kwezi zinto, ubume babo beblue buvumela ukonyuka kwegumbi eliyintloko.
Izibane ezisesibhakabhakeni zinembonakalo yale mihla kwaye zilungele amakhaya esitayile sangoku kunye nesimanje.
Izibane zeenkwenkwezi ezingezizo ezobugcisa yinto entsha ephuhliswe ngo-2015 yinkampani yase-Italiya egama linguCoelux
CoeLux®Igxile ekwenzeni iifestile ezingezizo kunye nezibane ezikhanyisa isibhakabhaka ezilinganisa ukubonakala kwazo kwaye ziphinda zibuyele kwisiphumo sokwenene kwelanga lendalo kunye nesibhakabhaka kusetyenziswa inkqubo ebonakalayo esekwe kwitekhnoloji ye-nano.
ICoelux Artificial Skylight Technology ivelisa kwakhona okwenzekayo kwindalo yokwenyani isebenzisa umthombo osetyenzisiweyo osekwe elangeni. Balinganisa ukukhanya kwendalo-ukusuka kumbala ukuya kubushushu kusetyenziswa umthombo wokukhanya okwenziweyo. Ngokwenene kukulinganisela okugqibeleleyo kokukhanya okungafunekiyo kunye nokukhanya kwendalo.
Izibane zesibhakabhaka ezingezizo ezenziweyo zikunceda ukonwabela ilanga kunye nesibhakabhaka kwanaxa uhlala endlwini. Inceda ukuphucula imeko kwisithuba kwaye iyenze ibe mnandi ngakumbi.
UGalley ikhitshi enefestile ngaphezulu kwesinki kunye nezibhakabhaka ezininzi.
Injengokubengezela kwenza uninzi lwesibane sakho esibhakabhakeni. Nangona unokukhetha phakathi kweplastiki okanye iglasi njengezinto zakho zokukhanya kwesibhakabhaka, okokugqibela kukhethwa ngakumbi ngenxa yenani lezibonelelo.
Uhlobo lweglasi oyikhethayo luya kugqiba ukuba isibhakabhaka sakho sihlala ixesha elide kangakanani. Uhlobo ngalunye lweglasi luneempawu ezahlukeneyo kwaye lunokuphucula indlela ukukhanya kwesibhakabhaka okusebenza ngayo. Nazi ezinye iintlobo zeglasi yokukhanya kwelanga:
Iiplexiglass - eyaziwa ngokuba yi-poly glass, i-Plexiglass yinto elula kunye ne-acrylic. Phakathi kwezinto zokukhazimla kwezikhanyiso ezisesibhakabhakeni, le yeyona ibuthathaka kwaye ithanda ukukrwela kunye nokonakala nje ukuba inkunkuma ibethe kuyo. Olona phawu luphambili lwezibane zelanga zePlexiglas kukuba banxibe phantsi xa bevezwa yimitha ye-UV. Ixesha elingaphezulu, baphinde babala umbala kwaye bajika batyheli, ezinokuthi emva koko zigqwethe umbono kwaye zichaphazele inani lokukhanya elidlula esibhakabhakeni.
Iglasi yokukhanya kwelanga enobulali - Iglasi enomsindo yomelele xa kuthelekiswa neglasi eqhelekileyo. Kukunyangwa kobushushu ukomeleza amandla alo. Oku kuyenza ukuba ikrwexe ukumelana kwaye inike ubushushu. Nje ukuba yaphuke, iiglasi ezinomsindo ziqhekeka zibe ziingceba ezingenabungozi endaweni yee-shards ezinkulu.
Iglasi yesilayidi esikhanyayo Iglasi elaminethiweyo wawutyabeka umaleko obhityileyo polyvinyl butyral (PVB) okanye ethylene-IVinyl acetate (EVA) ukuba sandwiched phakathi kweengcamba ezimbini zeglasi wobulali. Oku kuyenza yomelele kakhulu kwaye yomelele. Uninzi lwezibane eziphezulu eziphezulu kunye nezibhakabhaka eziphezulu zineglasi elaminethiweyo, ezenza ezona ndlela zibiza kakhulu kwintengiso.
Into omele uyazi ngaphambi kokufaka isibhakabhaka
Ikhitshi elinesibhakabhaka esivulekileyo kwigumbi lokuhlala elin iwindow yokucoca .
Ngaphambi kokuba ufake isibane esikhanyayo ekhayeni lakho, kufuneka uvavanye imeko esele ikho ekhaya kunye nolwakhiwo. Nazi ezinye izinto ezibalulekileyo zoyilo zokukunceda uthathe isigqibo sokuba ngaba ikhaya lakho lilungile ukukhanya kwesibhakabhaka:
Ngaba ukukhanya kwesibhakabhaka kuya kulungela isitayile sokwakha kunye noyilo lwekhaya lakho? Isibane esibhakabhakeni sinokuxubana phantse naso nasiphi na isitayile sokwakha, nokuba sisiko lesiqhelo, langoku okanye langoku. Unokufumana uyilo oluninzi lokukhanya kwesibhakabhaka kunye neemodeli ezinokungena nakuyiphi na indlela yokuyila. Inokuphucula kakhulu isibheno sokunqongophala kwekhaya elidala, isenze ukuba sibaluleke kakhulu.
Loluphi uhlobo lophahla lwendlu indlu yakho enalo? Izibhakabhaka zelanga azilulungele lonke uphahla. Ngenxa yokuba zifakwe kulayini wophahla, kuya kufuneka uqiniseke ukuba indlela eyakhelwe ngayo uphahla lwakho kufuneka ikwazi ukuxhasa isibhakabhaka. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo uhlobo lokulima olusebenziswa yindlu yakho ukuqinisekisa ukuba isibane esikhanyayo siya kungena ekhayeni lakho.
Uhlobo lokuqala lophahla lwendlu ngu Uphahla olubunjiweyo, eyakhiwe ngeendonga ezizodwa ezibekwe zaziimitha ezine ukwahlukana. Olu hlobo lophahla lulungele ngakumbi ukukhanya kwezulu kuba zinendawo eyoneleyo yokusika nokufaka isibane esibhakabhakeni phakathi kwemiqadi.
Olunye uhlobo lophahla lwophahla luyaziwa njenge Uphahla olwenziwe ngomatshini, elenziwe ngemikhonto okanye iiyunithi ezingunxantathu ezenziwe kwangaphambili. Oku akulunganga kangako kwisibane esibhakabhakeni kuba ii-trusses azenzelwanga ukuba ziguqulwe zakuba zifakiwe. Ukuyisika okanye ukuyiguqula nangayiphi na indlela kunokuncama ubume bophahla.
Nangona kunjalo, ukuba usenqwenela ukongeza ukukhanya kwesibhakabhaka kuphahla olwenziwe ngengca, kufuneka ukhethe ubungakanani obulungileyo. Tubungakanani obuqhelekileyo bomatshini wokuhombisa ujikeleze ii-intshi ezingama-24 embindini kwaye oku kwanele ukulungiselela isibhakabhaka esincinci. Isibane esibhakabhakeni masingabi ngaphezu kweenyawo ezimbini ububanzi ukulungelelanisa isithuba esilinganiselweyo phakathi kwemikhonto. Ukuba unqwenela ukuhamba nesibane esikhulu esibhakabhakeni, kuya kufuneka ubonane nenjineli eyakhayo ukuze bakwazi ukwenza ingcebiso eyimfuneko malunga nendlela onokutshintsha ngayo iingqameko zophahla lwakho.
Inga i-yakho eluphahleni indawo icacile? Nje ukuba unombono apho ungathanda ukongeza isibhakabhaka, jonga i-attic kuyo nayiphi na i-HVAC, i-wiring, okanye i-plumbing endleleni.
Yintoni ithambeka olifunayo elangeni? Ithambeka lophahla lwakho lukwabalulekile xa kufikwa kufakelo lwesibhakabhaka. Ngokubanzi, isibane sakho esibhakabhakeni kufuneka sifakwe kwithambeka lee-intshi ezintlanu ukuya kwezilishumi elinesihlanu iidigri eziphakamileyo kunobude bakho.
Ezinye ii-FAQ'S ezongeziweyo
Ngaba kufuneka ndifakele ukuleqa isibhakabhaka sam ? Chase, ngokwenkcazo, itonela eyenziweyo enceda ukuhambisa ukukhanya ukusuka esibhakabhakeni ngapha kophahla ukuya kwisilingi engezantsi. Luhlobo lwetonela elenziwe ngodonga olomileyo. Ukuba ikhaya lakho linophahla lwe-cathedral, awuyi kufuna ukuxoshwa kokufakwa kwesibhakabhaka.
Yintoni ikhithi ebengezelayo? Izixhobo ezibengezelayo zisetyenziselwa ukwenza ukuba ukukhanya kwesibhakabhaka kungangeni manzi. Inceda ukuthintela nakuphi na ukuvuza kunye nezikhukula, ethi yona incede ekupheliseni ukukhula okunokubakho komngundo ekhayeni lakho. Izixhobo ezibengezelayo zithengiswa zodwa kwaye
Yintoni ukukhanya kwesibhakabhaka? Ukubotshwa kwesibhakabhaka sisiqwenga sealuminium ebekwe ngaphandle kwefestile yophahla. Eyona njongo yayo kukongeza inqanaba elongezelelweyo lokhuselo, ukubonelela ngokuxhathisa kwemozulu kunye nokunika ukogquma okungaphezulu.
Yintoni ukugquma okuphantsi? I-E ephantsi imele ubume obuphantsi kwaye luhlobo lwesambatho esincinci esenziwe kwiglasi ukunceda ukubonisa ubushushu kunye nokunciphisaamaza e-infrared kunye ne-ultraviolet angena kuwo. Kuba icekeceke ngemicroscopic, ayinciphisi ukukhanya okuza ngefestile. Ngeglasi ephantsi ye-E, unokuthintela nawuphi na umonakalo obangelwe kukuvezwa yimitha ye-UV.
Yintoni omele uyiqwalasele xa uthenga ii-Skylights
Izibane ezisesibhakabhakeni ziza ngeentlobo ezahlukeneyo, izixhobo kunye noyilo, yiyo loo nto ukukhetha enye kunokuba ngumceli mngeni ingakumbi ukuba uziswa ngamakhulu okhetho. Ngelixa i-aesthetics isenokuba yenye yezona zinto ziphambili ekufuneka zithathelwe ingqalelo ekukhetheni isibhakabhaka, ayisiyiyo kuphela into ebalulekileyo. Kukho inani lezinye izinto ekufuneka ujonge kuzo xa uthenga enye xa usekhaya lakho kwaye nolu uluhlu lwazo:
Umsebenzi. Into yokuqala ekufuneka uyichonge xa ​​ukhetha isibhakabhaka ngumsebenzi wayo. Chonga intswelo yakho- ulindele ukuba isibane sakho sikwenze ntoni? Ngaba uyayidinga ukuze uzise ukukhanya kwendalo? Ngaba uyayifuna umoya owongezelelweyo? Ngaba uyayidinga ukongeza umbono ekhayeni lakho okanye ukuzisa ixabiso lobuhle?
Ixabiso lobuhle kunye noyilo- Ngelixa isibhakabhaka esibhakabhakayo sithathwa njengezinto zokwakha ezingathathi hlangothi, uyilo lwazo kusafuneka luhambisane nesitayile sendlu yakho. Uyilo lwabo kufuneka luhlanganiswe kakuhle kuyilo olungqongileyo ukuze baqiniseke ukuba bongeza ixabiso lobuhle ekhayeni lakho.
Indawo kunye nokuBekwa - Indawo, indawo kunye nolwalathiso lwemicimbi yakho yokukhanya kwesibhakabhaka . Eyona njongo yokukhanya kwelanga kukongeza ukukhanya okanye ukungena komoya kwindawo, ke xa ujonga indawo ekuyo, yibeke kwigumbi elimnyama okanye elimnyama. Ngokufanelekileyo, ukukhanya kwesibhakabhaka kufuneka kubekwe kwiindawo eziphantsi ngqo kophahla, njenge-attic egqityiweyo.
Ngendlela efanayo ulwalathiso lwelanga lakho likwangumbandela obalulekileyo ekufuneka ucwangciswe ngononophelo. Igumbi elijonge emantla Izibane ezisesibhakabhakeni zezona zilungileyo kuba zibonelela ngokukhanya unyaka wonke.
Kukho into efana nokuvezwa kakhulu kwaye awuyifuni xa ukhetha indawo yesibane sakho esibhakabhakeni. Khangela indawo engabonakali kakhulu kwimisebe ye-UV, kodwa nje ukuba uqaphele, yiya kwiingubo zeglasi eziza kunceda ukujongana nokugqithisa.
Ukuba enye yeenjongo zakho eziphambili zokufaka ukukhanya kwesibhakabhaka kukongeza umbono kwigumbi, qiniseka ukuba indawo oyikhethileyo ayithintelwanga. Umbono wakho wesibhakabhaka kufuneka ungaphazanyiswa yiyo nayiphi na imithi yokuthetha okanye izakhiwo ezinkulu. Imithi emikhulu inokuba luncedo kuphela ukuba ikhaya lakho likummandla ofumana imozulu eshushu kakhulu kwaye ufuna umthunzi owongezelelekileyo elangeni.
Ukuma kunye nokukhanya kwesibhakabhaka sakho kuya kuchaphazela ezinye izinto, njengobungakanani besibhakabhaka kunye nenani lezikhanyiso ozifunayo.
Ubungakanani begumbi kunye nokumila kwegumbi - Ubungakanani kunye nokumila kwegumbi kunokuchaphazela nokukhetha kwakho isibhakabhaka. Ngokusekwe kubungakanani obucetyiswayo kunye nobukhulu besibhakabhaka,isibane esibhakabhakeni kufuneka sibe malunga neepesenti ezi-5 ukuya kwezingama-20 zommandla womgangatho uwonke wegumbi. Igumbi elikhulu liya kufuna ukukhanya okukhulu kwesibhakabhaka.
Ubume begumbi lakho, kwelinye icala, buya kuchaphazela uhlobo lokukhanya kwesibane sakho kunye nendlela eya kuthi ifakwe ngayo. Amanye amagumbi anokufuna amanyathelo ongezelelweyo ukuze isibane esikhanyayo sisebenze ngokufanelekileyo, njengokongeza ityhubhu, njl.
Ufikelelo- Indlela ukukhanya kwesibhakabhaka okusebenza ngayo kuya kuchaphazela ukufikeleleka kunye nokulula kwayo. Ukuba ukhetha ukuhamba nesibhakabhaka esikhanyisiweyo, kuya kufuneka uthathe isigqibo malunga nendlela ofuna ukusisebenzisa ngayo - Ngaba ufuna indawo ekude kuba kunzima ukufikelela kwindawo? Okanye ungayisebenzisa ngokulula?
Injengokubengezela - Ngokwesiko, isibhakabhaka sisebenzisa enye into ngaphandle kweglasi enye, kodwa enkosi kwizinto ezintsha zangoku, unokukhetha kwizinto ezahlukeneyo ezineempawu ezizodwa.
Iglasi ayisiyiyo kuphela inketho yokukhanya kwesibhakabhaka. Ngaphandle kokukhetha phakathi komthi, i-vinyl okanye isakhelo sesinyithi, unokukhetha iglasi okanye iplastikhi. Injengokubengezela kweglasi kuphindwe kabini kubunzima njengokubengezela kweplastiki kunye neendleko eziphindwe kahlanu ngaphezulu. Nangona kunjalo, lutyalo-mali olumkileyo kuba lubonelela ngezibonelelo ezininzi ezinokubakho njengokuchasana nefuthe, ukutshintsha kombala okuncinci kwaye ikwazi nokwenza ngokwezifiso kakhulu. Ukongeza, unokongeza ubushushu kuyo ukuthintela imitha ye-UV ukuba ingangeni ngokukhanya kwesibhakabhaka sakho.
Ukuba ucwangcisa ukukhetha iglasi yokukhanya kwelanga, qiniseka ukuba uhamba neglasi enomsindo okanye elaminethiweyo. Ezi ntlobo zeglasi aziphazanyiswa yimpembelelo. Unako kwakhona ukuya kwiglasi yefestile ephindwe kabini, enokudibanisa zombini, kwaye olu lolona hlobo luqinisekileyo lokukhanya kwesibhakabhaka okufumaneka kwimarike.
Kuyilo olunxulumene ngakumbi ndwendwela igalari yethu iintlobo zoyilo lwesilingi .
I-MakerBeam XL yesiQali sokuQala sokuQala iAnodi… $ 129.00 umthengisi ogqibelele (24) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Umnumzana Longarm 9248 Pole-Lok Pole Extension $ 12.98 umthengisi ogqibelele (720) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Chase i Window eyiyo- kumagumbi ane ... $ 277.50 umthengisi ogqibelele (Mbini) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-SIG Skylights FMB 13 ½ x 24 Ukunyuka, ukuKhanya ngokuKhazimlayo kweGlasi… $ 261.00 umthengisi ogqibelele UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
iziqwenga zeenwele zohlaziyo lomtshato
umtshato uzenzele imihombiso
Hlaziya izibhambathiso izimvo kwiminyaka emi-5
eyona venkile yokudlala ngesondo kwi-Intanethi